राजधानीमा दुई वर्षभित्र स्काई रेल !
काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीमा स्काई रेल सञ्चालनबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । वाईबीडी साइमेक्स कम्पनी र महानगरपालिकाबीच बुधबार स्काई रेल चलाउने सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
करिब चारसय घरलाई सोलार वितरण
कोहलपुर, (बाँके) माघ २७ लामो समयदेखि विद्युतीकरण हुन नसकेको बाँकेको बघौडा क्षेत्रका करिब चारसय घरलाई सोलार वितरण गरिएको छ । निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले अनुदान दिइएको सोलारमा पहिलो चरणमा
फेसबुकले तपाईंलाई पैसा दिँदै छ, हेर्नुहोस !
हिमालपोष्ट/काठमाडौ, २७ माघ फेसबुक चलाउँदा भिडियो त अबस्य अपलोड गर्नुभयो होला? त्यो धेरैले हेरे होलान? हो अब तपाइले फेसबुकमा भिडियो राखेर धेरैले हेरे भने कमाई गर्नसमेत गर्न सकिने छ। फेसबुकले
पाँचौ दिन ५० हजार मान्छे मेलामा, आज अन्तिम दिन
‘आइसिटी सम्मेलन–२०१७’ समपन्न काठमाडौं, १८ माघ। भृकुटीमण्डपमा जारी “क्यान ईन्फोटेक २०१७ ” को सोमबार पाँचौ दिन ४७ हजार ३ सय २७ जनाले अवलोकन गरेका छन् । प्रदर्शनीको सोमबारसम्म २
क्यान इन्फोटेकको रौनक बढ्दै, १ लाख ४० हजार भन्दा बढिले गरे अबलोकन
हिमाल्पोष्ट/काठमाडौं । काठमाडौको भृकुटीमण्डपमा जारी “क्यान ईन्फोटेक” मेलामा शनिबार तेश्रो दिन ६९ हजार ४ सय ७८ जनाले अवलोकन गरेका छन् । पहिलो दिन ३४ हजार एक सय ५४ जनाले
क्यान इन्फोटेक मेला सुरु, के के छन त आकर्षण?
हिमालपोष्ट/काठमाडौं, १३ माघ सूचना प्रविधि सम्बन्धि मेघा मेला ‘सुविसु क्यान इन्फोटेक–२०१७’ बिहीबारदेखि भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको छ । सुचना, प्रविधि र सञ्चारमा भएका नयाँ आयामहरुको जानकारी गराउने यो मेला १८ गतेसम्म चल्ने
Good news, fellow humans: The United Nations has decided to take on killer robots. At the international Convention on Conventional Weapons in Geneva, 123 participating nations voted to initiate official
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आजदेखि औपचारिकरुपमा फोरजी/एलटिई (4G/LTE) प्रविधिको शुरुवात गरेको छ । कम्पनीले एक कार्यक्रमका बिच फोरजी प्रविधि सेवा शुरु गरेको घोषणा गरेको हो । कम्पनीले हाल नेपाल टेलिकमका
फेसबुकको Year in Review फिचरमा मनपरेको फोटो हाल्न सकिन्छ थाहा छ ?
सोसल नेटवर्किंग साइट फेसबुकले Year in Review फिचर ल्याएको छ । जस अनुसार फेसबुक प्रयोगकर्ताले पर्सनलाइज्ड भिडियोमा वर्ष २०१६ का आफ्ना संस्मरण हेर्न पाउनेछन् । फेसबुक लगइन गरिसकेपछि न्युजफिडको सबैभन्दा
सहकारीको खराब कर्जा अब अनलाइनमा
काठमाडौं, २२ मंसिर सहकारीको खराब कर्जा ब्यबस्थापनको लागि हालै साइन्टेल नामक सफ्टवेयर कम्पनिले यसको जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न कर्जा सूचना प्रणाली (क्रेडिट इन्फर्मेसन सिस्टम) नामक अनलाइन सिस्टम निर्माण गरेको छ, खासगरी सहकारीसँग
६८ वर्षमा आज चन्द्रमा पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आउँदै
हिमाल पोष्ट/काठमाडौं, कात्तिक २९ आज पृथ्वीको एकमात्र उपग्रह चन्द्रमा पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आउने भएको छ । आज साँझ पाँच बजेर ६ मिनेट जाँदा चन्द्रमा पछिल्लो ६८ वर्षमा पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक